Tsy mandeha intsoiny ilay lmioen anareo ao amin’ny OneDrive: Télécharger Ny Baiboliko 3. Mankahery anao hatranihatrany fa asa masina izao ataonao izao fa mizara ny tenin’Andriamanitra ho an’ny olona rehera! Tena sambatra, misaotra an’ mpanambotra de misaotra an’ Jesosy Kristy Tompo, ho Azy irery anie ny voninahitra, maranata. Par gasysoft dans Accueil le 5 Avril à Misy ny rehetra rehetra baiboly, fihirana, sns fa ilay izy ampiasaina ordinateur mihitsy no ilàna ity Baiboliko 3.
Manahoana i Sissy, Asa na efa nahazo ilay logiciel Baiboliko 3. Ny fihirana mbola tsy nisy fa vao eo am-panamboarana mihitsy. Mandehana ao amin’ny lien Mana isan’andro fa misy zavatra mahasoa isan’andro ao. Maiarahaba anao amin’ny anaran’i Jesoa Kristy. Manao ahoana daholo, Hono hoa efa nahazo ilay Baiboliko 3. Tsy mandeha intsoiny ilay lmioen anareo ao amin’ny OneDrive: Faly aho fa manana ny Baiboly ho isan’ny fitaovana ampiasaiko isan’andro ato amin’ny solosaina.
Misaotra mialoha Tompoko amin’izany version mobile izany. Raha mba potestanta olona afaka manampy ahy dia isaorako mialoha.
Tena mila ilay locigiel tokoa raha mba afaka mahazo e. Mitelecharger ity baiboliko ity aho fa tsy mety kanefa s aloha aho toa nety ihany fa inona no tokony hatao azafady indrindra. Tsara be sy manampy o Misaotra Répondre. Bonjour, mila namana tena efa nandray ny tompoafaka mahita ve rabefa: Tena sambatra, misaotra an’ mpanambotra de misaotra an’ Jesosy Kristy Tompo, ho Azy irery anie ny voninahitra, maranata.
Il vous permet aussi de faire des recherches par verset ou par mots clés. Betsaka ny olona no manoratra sy miantso, mangataka ny mba hamoahana ny version mobile ny Ny Baiboliko. Misaotra an’i Mr Rivo pprotestanta.
Ny fihirana mbola tsy fiihirana fa fihiraja eo am-panamboarana mihitsy. Vao nanandrana naka aho teo fa nahazo. Salama,mba atoroy fomba hahazoana an’io Ny baiboliko 3.
Miarahaba tompoko, ndrao misy manana solfa fihirana fanampiny kay amin’tsika ato azafady, ito ny adresse email-ko herjessramamonjisoa gmail. Miarahaba fihiranaa rehetra, ialana tsiny raha izao vao afaka mamaly antsika rehetra.
Faly miarahaba antsika rehetra. Misy proteetanta tiako ho hita ny toko sy andininy HAsiniavo: Samy hotahian’i Jesosy daholo indrindra fa ianao izay nanao ity logiciel ity. Manao ahoana toa tsy mande ilay lien ahafahana mahazo ilay logiciel? Mahefa be asan’ny Tompo.
Manao ahoana daholo, Hono hoa efa nahazo ilay Baiboliko 3. Salama tompoko, ahoana kay no mba hahazoana ilay Baiboly version complète? Afaka mba mahazo ve ampiasaina aty an-trano sy aty am-piangonana. Ho tahian’Andriamanitra isika protsetanta indrindra izay nahatotosa izay sanga n’asa tsara izao.
Tsy mandeha intsoiny ilay lmioen anareo ao amin’ny OneDrive: Sady mandeha amin’ny SE rehetra. Ny olana anefa dia izao: Mangataka ity logiciel ity aho julio Averiko eto indray ilay izy: Manahoana i Sissy, Asa na figirana nahazo ilay logiciel Baiboliko 3.
Vous pouvez aussi lire la Bible en 3 langues différentes: Mandehana ao amin’ny lien Mana isan’andro fa misy zavatra ;rotestanta isan’andro ao.
Ho tahian’ny Tompo ianao! Dia misy karazany maro any: Voaray ny adiresinao fa miezaka ny mandefa an’ilay logiciel a zao.